mShop - အလှအပ၊ကျန်းမာရေး
3 in 1 Nose up Good Quality
<3 Shoe Dryer <3 ( ဖိနပ်အခြောက်ခံစက် ) Good Quality
<3 #Handy Heater ( အသေးစားအပူအငွေ့ထုတ်စက် ) Good Quality........
Nose Lifter Good Quality
ကလေးခေါင်းရိတ်စက် Good Price...
TRP3X Muscle ကြိုး work out သွားစရာမလိုပဲ အိမ်မှာတင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်
Muscle Wheel ကြွက်သားများကိုသန်မာစေပါတယ်
Innisfree(Mask) သဘာဝ အသီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Innisfree maskလေးပါတယ်နော်
Clio Langage Lipstick Cilo lagage lipstick လေးကနှုတ်ခမ်းသားကိုနူးညံ့စိုပြေစေပါတယ်နော်
3CE Lip Stick 24နာရီ ပျက်မသွားပဲနှုတ်ခမ်းသားကိုနူးညံ့စိုပြေစေပါတယ်နော်
Langiege Skin Care Set မနက်၊ည နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် နွေ၊မိုး၊ဆောင်း မည်သည့်ရာသီဥတုမဆိုအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်နော်
Clio Cherry bloom eye shadow Clio Eye Shadow ရေစိုခံပြီးအရောင်အနုအရင့်လည်းတွေပါတာကြောင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှကိုရရှိစေပါတယ်နော်
innisfree(green tea) သုံးရတာအဆင်ပြေပြီးမျက်နှာအသားမခြောက်သွားအောင်လည်းထိန်းထားပေးပါတယ်
အရောင်ပြောင်းလက်သည်းနီ လက်သည်နီကြိုက်ကြသောမမတွေ ညီမလေးတွေအတွက် အရောင်ပြောင်းလက်သည်းနီလေးရှိပါတယ် အေးတဲ့နေရာရောက်ရင်အရောင်ပြောင်းပြီးအရမ်းလှတဲ့လက်သည်းနီလေးပါ
Compact Powder powder လေးပါ နှစ်ထပ်ပါပါတယ် ကြွေလေးလဲပါတော့ မျက်နှာလေးကိုပိုပြီးလှနေမှာပါ ကြွေပါတာမကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ရိုးရိုးပါတယ်နော်
Me Now (မိတ်ကပ်) အောက်ခံမိတ်ကပ်လေးပါ မိတ်ကပ်လေးကအရည်လေးဖြစ်လို့ လိမ်းရတာအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ကပ်လေးပါ
Floppy Hat ဦးထုပ် အလန်းစားပုံလေးတွေ ထွက်ဖို့ Floppy Hat လေးရှိမှနော်။
Jazz Hat ဦးထုပ် Cele တယောက်လို ခံစားမှုပေးစွမ်းတဲ့။ Jazz's freedom!
Mare Beach Hat ကမ်းခြေ ဦးထုပ် ကမ်းခြေကို အပန်းဖြေသွားဖို့။
Divo cap ဦးထုပ် Hey, ခေါင်းပူပြီး စိတ်ရှုပ်တာတွေ လွင့်ထွက်သွားမယ့် ever stylish cap လေး။ Keep calm and wearahat!
Candy Contact Lenses အလှတပ် မျက်ကပ်မှန် မျက်ဝန်းလှလှလေးတွေ ဖန်တီးဖို့။
Arder နေကာမျက်မှန်Sunglasses ဒီမှာ 2017 အတွက် အရမ်းတန်တဲ့ Priceလေးနဲ့ပ အလန်းလေးလာပြီ။
AILIN လှပတဲ့မျက်ခုံးလေးရဖို့ အတွက်ဆို AILIN မျက်ခုံးရိတ်ဓားလေးရှိတယ်နော်
SNAZII (hand) နို့ နဲ့ ပျားရည်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့အတွက်လှပတဲ့လက်ချောင်းလေးကိုရမှာနော် လက်ချောင်းလေးတွေကိုလဲပေါင်းတင်ဖို့ လိုတယ်နော်ချစ်တို့ ရေ
MEGANE (MAKE UP) မမတို့ ညီမလေးတို့ ရေပစ္စည်းတစ်ခုထဲမှာမျက်နှာကိုလှပအောင်ချယ်လို့ ရတဲ့ပစ္စည်း(၃)မျိုးပါတယ်နော်ဘယ်ပဲသွားသွားယူဆောင်သွားလို့ ရသေးတယ်နော်
Beauty care (မျက်နှာသစ်စက်) အိမ်မှာပဲမျက်နှာကိုဆေးတာသေချာသစ်တာလုပ်လို့ ရပြီနော်တစ်ခုထဲမှာတင်ငါးမျိုးပါတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်နော်ဈေးလဲအရမ်းမကြီးဘူးနော်
ကြိုးပျောက် Bra sis တို့ ရေမင်္ဂလာဆောင်တွေပါတီတွေရှိုးပွဲတွေတက်ရင်ဂါဝန်ဝတ်ရင် Bra ကြိုးပါလို့ စိတ်ညစ်နေလားစိတ်ညစ်မနေနဲ့ တော့နော်ကြိုးမပါတဲ့Braလေးရှိနေပြီနော်